ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေ နဲ့ ပဲနို့ - Page 17 of 40 - Hello Sayarwon
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အစားအသောက်တွေကို အားရှိစေဖို့ သေချာလေး စား​ကြရပါတယ်။ ဒီကာလမှာ နို့က မိခင်တိုင်းအတွက်ရော ဗိုက်ထဲက ဘေဘီလေးအတွက်ပါ အထူးသင့်​တော်တဲ့အရာပါ။ နို့က အာဟာရ ပြည့်ဝတယ် ဆိုပေမယ့် မိခင်က နို့သကြားဓာတ် မစုပ်ယူနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ အာဟာရ ပြည့်ဝအောင် နို့သောက်လို့ မရပါဘူး။ ဒီအခါမှာ အာဟာရလည်းပြည့် ကျန်းမာရေးပြဿနာလည်း ကင်းစေဖို့ သောက်လို့ရတဲ့ နို့တစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ပဲနို့သောက်တာပါ။
ပဲနို့က ပရိုတင်း ပြည့်ဝစွာပါပေမယ့် အပင်ကနေရတဲ့ ပရိုတင်းပဲ ပါဝင်တာဖြစ်ပြီး နို့သကြားဓာတ် မစုပ်ယူနိုင်တဲ့ ပြဿနာ ကင်းပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ပဲနို့မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ပဲနို့သောက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လို အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်နေလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးပါမယ်။
ပဲနို့ တစ်ခွက်ရဲ့ အာဟာရတန်ဖိုး
ပရိုတင်း – ပဲနို့က ပရိုတင်းကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာ ရင်းမြစ်တစ်ခုပါ။ ပရိုတင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ် ၉ မျိုးစလုံး ပါဝင်နေပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ပရိုတင်း ပြည့်ဝမှုက မေမေရော ဘေဘီလေးအတွက်ပါ အရေးပါပါတယ်။
ပဲနို့မှာပါတဲ့ ပရိုတင်းက အသားတွေလို အဆီများတဲ့ ပရိုတင်း မဟုတ်ဘဲ အဆီပါဝင်မှု နည်းတဲ့ ပရိုတင်း တစ်မျိုးပါ။
ဖောလစ်အက်ဆစ် – ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဖောလစ်အက်ဆစ် ပြည့်ဝဖို့ကလည်း မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဖောလစ်အက်ဆစ် ပြည့်ဝမှုက ဘေဘီလေးရဲ့ အာရုံကြောစနစ်ကို အကောင်းဆုံး ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ ပဲနို့က ဖောလစ်အက်ဆစ် ကြွယ်ဝတဲ့ သဘာဝ အရင်းအမြစ်တစ်ခုပါ။
ဗီတာမင်များ – ပဲနို့မှာ ဗီတာမင် A၊ ဗီတာမင် B1၊ ဗီတာမင် E တို့လိုမျိုး ဗီတာမင်တွေ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီ ဗီတာမင်တွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေကိုတင် ကျန်းမာစေတာ မဟုတ်ဘဲ ဗိုက်ထဲက ဘေဘီလေးကိုလည်း အကောင်းဆုံး ဖွံ့ဖြိုးစေပါတယ်။
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် – ပဲနို့မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတွေကို အင်အားပြည့်ဝစေမယ့် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးပြုတဲ့ အဆီ – ပဲနို့မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကနေရတဲ့ အဆီတွေပါဝင်နေပြီး ဗိုက်ထဲက ဘေဘီလေး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
ပဲနို့မှာ ပရိုတင်း၊ အမျှင်ဓာတ်၊ ဗီတာမင် A၊ ဗီတာမင် B1၊ ဗီတာမင် E နဲ့ ဖောလစ်အက်ဆစ်တို့ ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီလို အာဟာရပြည့်ဝမှုက မိခင်ရော ဘေဘီလေးကိုပါ လုံလောက်ပြည့်ဝတဲ့ အာဟာရ ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။
ပဲနို့က အင်အားပြည့်ဝစေဖို့ လုံလောက်တဲ့ အာဟာရတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ပဲနို့မှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကနေရတဲ့ အဆီ၊ riboflavin တို့ လုံလောက်ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ ခြေကုန်လမ်းပန်းကျတာကို သက်သာစေနိုင်သလို ဗိုက်ထဲ့ ဘေဘီလေးကို အကောင်းဆုံး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ အားဖြည့်ပေးပါတယ်။
ပဲနို့မှာ အခြားသော နို့တွေလိုပဲ ကယ်လ်ဆီယမ် ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ကယ်လ်ဆီယမ်ပြည့်ဝမှုက မေမေကို အရိုးနဲ့ ကြွက်သားတွေ သန်မာစေသလို ဗိုက်ထဲက ဘေဘီလေးရဲ့ အရိုးနဲ့ကြွက်သားတွေ ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ အားဖြည့်ပေးပါတယ်။
ပဲနို့မှာ မဂ္ဂနီဆီယမ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ စိတ်အတက်အကျမြန်တာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေ မဖြစ်စေဖို့ အားဖြည့်ပေးပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတွေအတွက် ပဲနို့က အခုလို အကျိုးကျေးဇူးများတယ်ဆိုပမယ့်မယ့် တစ်နေ့ကို ၂ ခွက်လောက်ပဲ သောက်သင့်ပါတယ်။ အချိုများတာမျိုးကိုလည်း မသောက်သင့်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ပဲနို့သောက်ပြီးတဲ့အခါ အသားတွေ ယားမယ်။ အဖုအပိမ့်တွေ ထွက်မယ်ဆိုရင် မသောက်ပါနဲ့။ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာတိုင်ပင်ပြီးမှာ သောက်ပါလို့ အကြံပြုပါရစေ။
How Safe Is Soy Milk During Pregnancy? https://www.beingtheparent.com/soy-milk-during-pregnancy/ Accessed Date9June 2020
Is It Safe To Drink Soy Milk During Pregnancy? https://www.momjunction.com/articles/safe-drink-soy-milk-pregnancy_0086243/ Accessed Date9June 2020
Is Soy Safe During Pregnancy? https://www.parents.com/pregnancy/my-body/nutrition/is-soy-safe-during-pregnancy/ Accessed Date9June 2020
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေ ဒန့်သလွန်သီး စားလို့ရလား………….